Lviv - Study muUkraine. Ukrainian Munopinda Center
Lviv ndiro guta rakasiyana in which history, tsika nemagariro, mafungiro nyika mbiri - kuMabvazuva uye West - vari tolerantly zvibatanidzwe. Zvinofadza kuona kuti guta nhema vari kure yakaenzana kubva Crimea (kana, zvakananga, guta Theodosia), aimbova Ages Kafa, uye Venice. pachena, Lviv kwakaita nzvimbo panguva mharadzano netsika pose uye dzomunyika kwakachinja wayo inimitable chadenga. Pasinei nematambudziko akawanda vakauya nehondo yakawanda pamusoro refu emakore Lviv nhoroondo, mapurani varipo veguta akaramba anenge sanganisika.
Lviv huru remunharaunda centre, akagara munzvimbo 155 ba. makiromita. About 730,000 vanhu riripo zvachose muLviv. Vazhinji vanogara veguta Kunoumbwa dzemadzinza Ukrainians, kunyange dzimwe nzanga akadai Poles, vaJudha, vaGiriki, vokuGermany, vokuArmenia, vokuRussia, nezvimwewo. vari kumiririrwa.
Lviv iguta vadzidzi. About 150,000 vadzidzi kudzidza muna yepamusoro nemasangano ane zvakasiyana-siyana specializations. Maererano nevanhuwo musarudzo, Lviv ndiro guta rechipiri zvikuru nevanhu kuUkraine pashure rayo guru - Kyiv. Kutanga kubva December 1998, nechepakati cheguta waibatanidzwa tsika uye nhoroondo nhaka UNESCO. 20% vose mapurani varipo vanowanwa muLviv.
Lviv chinhu rakashama mhepo miziyamu and the embodiment of the Ukrainian culture and European charm, sakanganwika panoram, uye yakasiyana Monuments of akitekicha, tsika akwegura uye, zvirokwazvo, flavoured kofi ari kunozivikanwa Lviv kofi dzimba. Vaenzi ava nekuona kuburikidza chaiwo ezvinhu anoshamisa Kudzikama kutonga muguta uye akafara achirova mutsa vomunharaunda vagere.
Lviv ndiro guta vakawanda mumayunivhesiti akare, nemamwe establishments kwesayenzi uye yamabhuku, uye maraibhurari nomukurumbira uye mamiziyamu. Unogona remba pamusoro mumigwagwa nyarara, nguva imwe neimwe kuziva chinhu chitsva uye inonakidza nokuda pachako.
Last update:24 Chivabvu 19